WARARKA BARAAWEPOST Sabti 27 july 2013<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Weerar ismiidaamin ah oo gowr dhow lagu qaaday Xarun Turkiga ay ku leedahay Muqdisho
Qarrax weyn ayaa wuxuu maanta ka dhacay agagaarka Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya iyadoona qarraxaasi kadib ay xigtay rasaas xooggan oo halkaas laga maqlayay iyadoon la garanayn cidda isweydaarsanaysay rasaasta, laakiin sida ay sheegayaan wararka qaar waxaa rasaasta ridayay ilaalada Turkiga ah ee xaruntaas ilaalada ka haya, kuwaasoo ka tirsan ciidamada sida aadka ah u tababaran ee dowladda Turkey.
Wararka ku sasabsan qarraxaas ayaa waxay sheegayaan inuu qarraxaasi ka dhacay Kaso horjeedka Dugsiga Sare ee Banaadir ee degmada Hodan halkaasoo meel u dhow ay deggan yihiin Shaqaalaha Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya, waxaana qaraxa kadib agagaarkaasi goobtaas xiray ciidamada Dowladda, iyadoona ay isla markiiba halkaas gaareen gawaarida Deb damiska iyo kuwa Ambalaaska.
Warar horu dhac ah oo laga helayo goobtii uu qarraxu ka dhacay ayaa sheegaya in tiro ku dhow illaa iyo shan ruux ay ku geeriyootay halka dhaawacana la filayo inuu intaas kas ii badan yihiin.
Weerarkani ismiidaaminta ah ka sokow waxaa maanta sidoo kale ka dhacay Isgoyska Sanca ee degmada Yaaqsheed ee magaalda Muqdisho qarrax kale kadib markii gaari lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa uu halkaas ku qarxay.
Qarraxii lagu qaaday xarunta ay deggan yihiin shaqaalaha Turkida ayaa sida wararku sheegayaan waxaa fuliyay labo ruux oo isa soo miidaamiyay kuwaasoo watay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay isla markaana ay doonayeen in ay gudaha u galaan xarunta Isbitaalka Shifa oo kamid ah Isbitaalada ku yaala Muqdisho ee ay maamusho dowlada Turkiga.
Sida wararku sheegayaan labadaas shaqsi ee isa soo miidaamiyay ayaa waxay damceen in gaarigii ay wateen ay gudaha ula galaan xarunta Isbitaalka, hayeeshee ay gidaar ku yaal dhabarka dambe ee Isbitaalka ku dhifteen gaariga halkaasna uu ku qarxay baabuurku.
Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in qaar kamid ah shaqaalaha Turkiga ee ka howlgalayay Isbitaalka uu dhaawac soo gaaray, waxaana illaa iyo haatan la xaqiijiayay dhaawaca labo kamid ah shaqaalaha Turkiga ah, inkastoo loo mallaynayo in khasaaruhu uu intaasi ka badan karo.
Gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa oo saaka ku qarxay isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka maga soo gooraya isgoyska Sanca ee degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan waxaa goor dhow halkaas ku qarxay gaari sida la sheegayo ay ku xirnaayeen.
Gaariga qarxay ayaa sida warar hordhac ah oo halkaas naga soo gaaraya waxay sheegayaan inuu leeyahay khasnajiga wasaarada howlaha guud ee guriyeynta ee xukuumada Somalia oo magaciisa la yiraahdo Jabriil Maxamuud Iimaan
Dad ka ag dhowaa goobtii uu qarraxu ka dhacay ayaa sheegay in gaariga qarxay uu taagnaa meel wadada dhinaceeda ah, isla markaana uu si lama filaan ah halkaas ugu qarxay,waxaana gaariga la socday dhowr qofood.
Ciidamo ka tirsan dowlada ayaa gaaray goobta uu ku qarxay gaarigaas ee nawaaxiga isgoyska Sanca, iyadoo gaarigana la sheegay inuu guud ahaan dab qabsaday uuna halkaas ku bas beelay.
Ma cadda in qarraxii gaarigaas qabsaday uu ahaa mid gaariga ku xirnaa ama mid waddada dhinaceeda loo dhigay maaddama ay weli socdaan baaritaankii ay hayaadaha amnigu ku hubinayaan sidii ay wax u dhaceen.
Sidoo kale waxa la sheegayaa in qarraxaasi uu sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac labadaba.
Wararku waxay sheegayaan in milkiilaha gaariga Jabriil Maxamuud Iimaan uu ka soo gaaray qarraxaas dhaawac fudud oo gubniin ah ka soo gaaray wejiga iyo meelo kale oo jirkiisa ka mid ah, hase ahaatee uu qaraxaas ku geeriyooday nin ay saaxiibo ahaayeen oo gaariga la saarnaa kaasoo sida wararku sheegayaan dhamaantiis ku gubtay gaariga qarxay halkaasna uu ku geeriyooday.
Sida ay sheegeen howlwadeen ka tirsan wasaarada howlaha guud ee guriyeynta waxaa xarunta wasaaraddaas soo gaaray khasnajiga gaarigiisa la qarxiyay Jabriil Maxamuud Iimaan oo dhaawacyo qaba hase ahaatee lugihiisa ku socda, iyadoo wax yar ka dibna loo sii gudbiyey isbitaalada Muqdisho.
Qaraxyada lagu soo xiro gaadiidka ay wataan madaxda dowlada ayaa mudooyinkan ku soo badanayey Muqdisho iayadoo sida la wada xasuusto laba maalin ka hor ayuun bay ahayd markii suuqa bacaadlaha ee degmada Xamarweyne uu ku qarxay gaari ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka inkastoo ay ka badbaadeen haseyeeshee uu ku geeriyoodey hal ruux halka toddobo kalena ay ku dhaawacmeen.